हरेक वर्ष दशैं आउँछ । दशैं आएको समयमा सुर्खेतका बाढीपीडितका घरमा न खुशी आउँछ न उत्साह नै, बरु निराशा मात्रै आउने गर्छ । अन्यले घरमा खसी काटेर रमाइलो गरिरहेको समयमा बाढीपीडितहरुको घरमा दशैंका लागि भात खाने न चामल नै हुन्छ, न जाडो याम सुरु हुनै लाग्दा तातो कपडा नै हुन्छ ।
सुर्खेतमा ६ वर्ष अघि २०७१ साउन २९ गते ठूलो बाढी आयो । ६ वर्षअघि बाढीले घरखेत बगाएपछि विस्थापित भएका सुर्खेतका बाढीपीडित १ हजार ४५ परिवारको अवस्था उस्तै दर्दनाक छ । सुर्खेतको बाढीमा परी एकसय ३४ जनाको मृत्यु भएको थियो । जसमध्ये ९६ जनाको लाससमेत भेटिएन ।
भेरीमा आएको बाढीले बराहताल गाउँपालिकाको वडा नं. २ गिरीघाटमा बस्दै आएकी पार्वती कामीको जीवनमा बज्रपात भयो । जीवनमा सबैभन्दा ठूलो विपत्ति व्यहोर्नुपर्यो । उनले घर, खेत मात्र गुमाइनन्, ८ वर्षीया नातिनी, ७० वर्षीया सासुआमा र भान्जालाई समेत गुमाइन् ।
तर आफूले भने रातभर किमुको रुखमा चढेर ज्यान जोगाइन् । बाढीमा बग्दाबग्दै बाँचेकी पार्वतीलाई अहिले पनि मृत्युसँग संघर्ष गर्दै बाँच्नु परेको छ । ‘दशैं आयो भन्छन्, न मलाई हर्ष छ न कसैले केही देला भन्ने आशा नै बाँकी छ,’ निराश हुँदै उनले आफ्नो पीडा सुनाइन्, ‘सानो घरसम्म भइदिएको भए बाँकी जीवनका हरेक दिन म दशैं सम्झेर बिताउँदै आउने थिएँ ।’
पञ्चपुरी नगरपालिकाको तिखाकुनामा पालको छाप्रो बनाइ बस्दै आएका सर्जन थापालाई दशैंसँग कुनै वास्ता छैन । ‘दशैं आएर के गर्नु, आफूसँग दशैं मनाउने केही छैन । दशैं त हाम्रा लागि दशा बनेर हरेक वर्ष आउँछ । न खेतबारी नै रह्यो, न घर नै बाढीले राख्यो । यसपाली अलिकति पैसा जोडजाम गरेर छोरा छोरीलाई न्यानो कपडा खरिद गर्ने सोच बनाएको छु,’ थापाले दुखेसो पोखे ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नं. ७ महिला विकास केन्द्रमा पालमुनि बस्दै आइरहेकी विमला दमाईलाई यो वर्षको दशैंले ठूलै दशा निम्त्याएको महसुस भएको छ । लकडाउनका कारण दुइ/चार पैसा पनि आम्दानी नभएको यो समयमा दशैंको दिन दुई किलो बोइलरको मासु पनि खुवाउन नसकिने अवस्था रहेको भन्दै बिलौना गरिन् ।
‘जुन दिन दशा लाग्यो, त्यही दिन दशैं हामीबाट विदा भयो,’ विमलाले भनिन्, ‘६ वर्ष पूरा भइसक्यो हाम्रो त्रिपालमा दशैं आएन ।’ मजदूरी गरेर पेट पाल्ने विमलाका लागि यो वर्षको दशैंमा लकडाउनका कारण झन् ठूलो दशा निम्तिएझैं लाग्छ ।
दशैंतिहारलगत्तै आउने चिसो मौसमले झनै चिन्तामा पार्छ, विमलालाई । चिसो मौसममा लगाउने न न्यानो कपडा छ, न त्रिपालले शीत थेग्नेवाला छ । उनी भन्छिन्,’ हाम्रा पालमा भ्वाङ परिसके, सरकारको मन पनि फाटेन ।’
भेरीगंगा नगरपालिका वडा नं. ९ मसिनेमा छाप्रो मुनि बस्दै आइरहेका नौसरा सुनारको पनि भनाई उस्तै छ । ‘यो दशैं हुनेखानेहरुको लागि मात्र आउने गर्छ । हामीजस्ता पालमुनि शीत खेप्दै आइरहेकालाई के को दशैं आउनु बाबु,’ लोकान्तरसँग कुरा गर्दै उनले भनिन्, ‘नजिकै रहेको छिन्चु बजारमा दशैंको रौनक छाइसकेको छ । नयाँ-नयाँ कपडा किन्ने, खसीबोका किन्ने काम भइरहेको छ तर हाम्रा छोराछोरी त्यो हेररै बसेका छन् । अब त सरकारबाट केहि पाउँला भन्ने आशै हरायो । दशैं आउला, तिहार आउला आओस ।‘
यसरी दशैंमा त्रिपालभित्र दशा भित्र्याउनेहरूको संख्या सानो छैन । विस्थापितमध्ये वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा ३ सय २२, पञ्चपुरीमा २ सय १४, बराहताल गाउँपालिकामा २सय ५९, चौकनेमा ६, भेरीगंगामा एकसय ९८, गुर्भाकोटमा ३४ र लेकवेशीमा १२ परिवार हाल विभिन्न अस्थायी शिविरहरुमा बसिरहेको सरकारी तथ्याकं छ ।